“Ndao hihira” : hiray sehatra i Tovo J’Hay sy i Mirado | NewsMada
“Ndao hihira” : hiray sehatra i Tovo J’Hay sy i Mirado
Efa 8 taona tsy niakatra ny lapan’ny Fantanjahantena i Tovo J’Hay. Aman-taony koa tsy nisehatra teto an-tanindrazana koa i Mirado. Fotoana iray nandrasana ela ny “Ndao hihira” ho an’ny mpankafy.
Maninona no i Tovo J’Hay sy i Mirado? “Efa ela izahay no nanam-paniriana hanao zavatra miaraka, saingy tsy tanteraka mihitsy izany. Raha nanatona anay ny mpikarakara, niara-nanaiky ny rehetra satria io izany ilay fotoana”, hoy ny fanazavan’i Tovo J’Hay. Hiray sehatra anatin’ny “Ndao hihira”, fampisehoana goavana hotontosaina etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena, ny alahady 4 febroary ho avy izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro izany.
Araka ny fanazavana hatrany, samy hanao ny hirany izy mirahalahy ireto amin’io fotoana io. Hisy fotoana kosa anefa hanaovan’i Mirado ny hiran’i Tovo J’Hay sy ny mifamadika amin’izay. Mazava loatra fa hisy ny fampiaraham-peo eny anelanelany eny. Tsy fampiaraham-peon’izy mirahalahy ireto ihany, satria fantatra fa nanasa vahiny koa izy ireo. Ho avy handravaka ny seho i Tosy sy ny feomangany, hampian’i Christian Kely, izay anisan’ny zandriny indrindra amin’ireo mpanakanto efa be mpankafy.
Hita taratra anatin’ilay rakitsary “Tsy miova”, efa mandeha amin’ny fahitalavitra, ny endrikendriky ny fampiaraham-peo hotontosain’ireto mpanakanto ireto. Ho an’ireo mpankafy an’i Tovo J’Hay manokana, fotoana nandrasana ela io, satria efa tamin’ny taona 2010 izy no niakatra ny lapan’ny Fanatanjahantena farany. Fotoana hitondrany ny rakikira “Angolanao” hatrany izany.
Maty ny mpamatsy odigasy an’i Del Kely 25/11/2020